मलेसियाको पाहाङ राज्यमा आएको बाढीमा परि ६ जनाको मृत्यु, ५० हजार बढी विस्थापित। – Wow Sansar
मलेसियाको पाहाङ राज्यमा आएको बाढीमा परि ६ जनाको मृत्यु, ५० हजार बढी विस्थापित।
January 9, 2021 53
पछिल्लो केहिदिनदेखी मलेसियामा अत्यधिक बर्षापछि आएको बाढीमा परेर कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मलेसियाको पूर्वीतटीय क्षेत्र पाहाङ राज्यमा आएको बाढीका कारण अरु ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएको मलेसियन अधिकारीहरुले शुक्रबार स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन्।
बर्षापछि तटीय क्षेत्रमा पानी भरिएर मानवीय क्षति भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले आधा शतब्दीकै सवैभन्दा खराब बाढी आएको पनि बताएका छन् । घटनास्थलमा पिडितहरूलाई उद्धारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा उद्धारकर्ताहरु परिचालन गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
बाढी गएको क्षेत्रमा लगातार बाक्लो बर्षा भएको थियो । बर्षापछिको बाढीले बस्ती डुवानमा परेपछि ४७ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको सरकारी प्रारम्भिक तथ्याङ्का छ ।
“बाढीका कारण मैले मेरो सबै जायजेथा गुमाएको छु, बाढीले मेरो घरको छानो समेत डुवाएको छ,” कारखानामा काम गर्ने ५९ बर्षिय मजदुर तान कोङ लेङले भन्नुभयो । घटनाका बारेमा बताइरहँदा उहाँले आखाँबाट आशु झारिरहनु भएको थियो ।
घटना भएको क्षेत्रमा हरेक बर्ष बढी बर्षा भएको बेला बाढीले दुःख दिने गरेको छ । बाढीका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति पनि हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । बाढीका कारण मुख्य राजमार्गसहित धेरै सडक सञ्जालमा क्षति भएकाले यातायात सेवा पनि प्रभावित भएको छ।Bernama
Prevनेपालमै भेटियो यस्तो शक्तिसालि मन्दिर, जे माग्यो पूरा हुने नाग देवता यसरी निस्किए (भिडियो हेर्नुहोस् )
Nextजुत्तामा भरेर राखिएका थिए ११९ जीवित दुर्लभ कीरा, डिब्बा खोल्दै उड्यो होश !
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6724)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3800)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (1890)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1263)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1073)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1067)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1036)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1005)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (674)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (626)
सास गनाउने समस्याले लज्जित हुनुपरेको छ ? उसोभए यस्ता छन् छुटकारा पाउने उपाय
आज माघ ०३ गते शनिबार, हेर्नुहोस तपाइको राशिफल।
शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय